Kutengesa Kwako uye Zvikwata Zvekushambadza Zvinogona Kumira Kubatsira Kune Digital Kuneta | Martech Zone
Makore mashoma apfuura anga ari dambudziko risingadaviriki kwandiri. Kudivi remunhu, ndakakomborerwa nemuzukuru wangu wekutanga. Kudivi rebhizinesi, ndakabatana nevamwe vandinoshanda navo vandinoremekedza zvikuru uye tiri kuvaka dhijitari shanduko yezano iri kunyatso simuka. Ehe, pakati pazvo, kwave nedenda rakakanganisa pombi yedu uye kuhaya… iro radzoka mugwara izvozvi. Kanda muchinyorwa chino, kufambidzana, uye kusimba ... uye hupenyu hwangu inzvimbo inochengeterwa mhuka izvozvi.
Chinhu chimwe chaungave wakaona mumakore mashoma apfuura ndechekuti ndakambomira podcasting yangu. Ndakanga ndine 3 anoshanda podcasts makore mashoma apfuura - ekushambadzira, ebhizinesi renzvimbo, uye nekutsigira veterans. Podcasting chishuwo changu, asi pandakatarisa chizvarwa changu chinotungamira uye kukura kwebhizinesi, yanga isiri kupa kukura kwemari nekukurumidza saka ndaifanira kuiisa parutivi. Podcast yemaminetsi makumi maviri inogona kucheka kusvika maawa mana kubva pazuva rangu rekushanda kuronga, kurekodha, kugadzirisa, kushambadza uye kusimudzira chikamu chega chega. Kurasikirwa nemazuva mashoma pamwedzi pasina kukurumidza kudzoka pakudyara kwaisava chinhu chandaikwanisa kutenga izvozvi. Side note… Ndichashandisa zvakare imwe neimwe yemapodcasts nekukurumidza pandichakwanisa kuwana nguva.
Kuneta kwedhijitari kunotsanangurwa semamiriro ekuneta kwepfungwa kunounzwa nekunyanyisa uye panguva imwe chete kushandiswa kwematurusi akawanda edhijitari.
Lixar, Kutarisira Digital Kuneta
Ini handikwanise kana kukuudza kuti mangani mafoni, mameseji akananga, uye maemail andinowana zuva nezuva. Zvakawanda zvikumbiro, vamwe ishamwari nemhuri, uye - chokwadi - muhuswa mune mamwe anotungamira uye kutaurirana nevatengi. Ndinoita nepandinogona napo kusefa nekuronga nepandinogona napo, asi handisi kufambirana… zvachose. Pane imwe nguva mubasa rangu, ndaiva nemubatsiri mukuru uye ndinotarisira kune humbozha zvakare ... asi kukwidza mubatsiri kunoda nguva zvakare. Saka, ikozvino, ndinongotambura nazvo.
Kubatanidza basa mukati memapuratifomu andinoita zuva rese, digitaalinen kutaurirana kuneta zvakare inorema. Zvimwe zvezviitwa zvinondishungurudza zvinondipedza simba ndezvi:
Ndine mamwe makambani anotonhora anobuda anotoita otomatiki mhinduro uye anozadza inbox yangu zuva rega rega nemameseji ehupenzi senge, Kuendesa izvi kumusoro kwebhokisi rako rekunyora… kana kuvhara email ne RE: mumutsara wenyaya kufunga kuti takambotaura. Hapana chinotyisa… Ndingabheja kuti iyi ihafu yebhokisi rangu rekutumira izvozvi. Nekukurumidza pandinovaudza kuti vamire, imwe denderedzwa yeotomatiki iri kuuya. Ndakatozoisa mamwe masefa anoshamisa uye mitemo yebhokisi retsamba yekuchenjera kuedza kuunza mameseji akakosha kuinbox yangu.
Ndine mamwe makambani anokanda mapfumo pasi pakundibata neemail, obva anditumira meseji pasocial network. Wakawana email yangu here? inzira yechokwadi yekuve nekukuvharira kwangu pasocial media. Dai ndaifunga kuti email yako yakakosha, ndingadai ndakapindura ... rega kunditumira mamwe mashoko uye kuvhara nzira yose yandinayo.
Chakanyanya kunaka ndevandinoshanda navo, shamwari, uye mhuri ine hasha uye vanotenda kuti handina hunhu nekuti ini handipindure. Hupenyu hwangu HAKAZARA izvozvi uye zvinoshamisa chose. Kusakoshesa chokwadi chekuti ndakabatikana nemhuri, shamwari, basa, imba, kusimba, uye chinyorwa changu zvinoodza mwoyo. Ini zvino ndinogovera yangu Karenda link kushamwari, mhuri, uye vandinoshanda navo kuitira kuti vagochengeta nguva pakarenda yangu. Uye ini ndinodzivirira kalendari yangu!
Ndiri kutanga kuona makambani akawanda uye akawanda SPAM mameseji angu… izvo zviri kupfuura kutsamwisa. Mameseji mameseji ndiwo anonyanya kupindira uye emunhu panzira dzese dzekutaurirana. Meseji inotonhora kwandiri inzira yechokwadi yekuti ndisamboita bhizinesi newe zvakare.
Handisi ndega… maererano netsvakiridzo mitsva yabuda kubva kuPFL:
Maneja kuburikidza neC-Level vanopindura vanogamuchira kanopfuura ka2.5 more evhiki nevhiki ekusimudzira maemail, avhareji 80 maemail pasvondo. Side note… Ndinowana zvinopfuura izvozvo pazuva.
Enterprise professionals vanogashira an avhareji yemaemail makumi matanhatu neshanu pasvondo.
Vashandi veHybrid vanogamuchira chete 31 emails pavhiki.
Vashandi vari kure vanogamuchira pamusoro pe170 emails pavhiki, pamusoro pe6 kakawanda maemail kupfuura avhareji mushandi.
pamusoro hafu yevashandi vese vari kuona kuneta nekuda kwehuwandu hwemashoko ekusimudzirwa kwedhijitari dzavanogamuchira kubasa. 80% yeC-level vakapindura vakaremerwa nehuwandu hwemadhijitari ekusimudzira avanogamuchira!
Mabatiro Andinoita NeDigital Kukurukurirana Kuneta
Mabatiro angu pakuneta kwekutaura kwedijitari ndeiyi:
mira - Kana ndikawana maemail akawanda anotonhora kana mameseji, ndinoudza munhu wacho kuti amire uye andibvise kubva kune yavo database. Kazhinji yenguva, inoshanda.
Usakumbira Ruregerero - Handimboti "Ndine hurombo ...” kutoti ndikatarisira kuti ndaizopindura munguva yakati. Izvi zvinotosanganisira kubhadhara vatengi vandinoyeuchidza kazhinji kuti ndakaronga nguva navo. Handina urombo ndakabatikana nebasa rakazara uye hupenyu hwemunhu.
Kudzima - Ini kazhinji ndinodzima mameseji pasina kana mhinduro uye vanhu vazhinji havanetsi kuedza zvakare kuSPAM ini zvakare.
firita - Ini ndinosefa mafomu angu, inbox, uye mamwe masvikiro emadomasi uye mazwi makuru andisingazombopindure. Iwo mameseji anobva adzimwa ipapo. Ini ndinowana mamwe mameseji akakosha akasanganiswa dzimwe nguva? Hongu… hongu.
Tungamira – Inbox yangu inotevedzana yeSmart Mailboxes anosefa zvakanyanya nemutengi, masystem meseji, nezvimwe. Izvi zvinoita kuti ndigone kutarisa zviri nyore pane imwe neimwe uye kupindura nepo imwe inbox yangu yakazara nezvinhu zvisina maturo.
Usavhiringidza - Foni yangu iri paUsavhiringidza uye voicemail yangu yakazara. Yup… kunze kwemameseji, kufona ndiko kunokanganisa zvakanyanya. Ini ndinochengeta chidzitiro chefoni yangu kuti ndione kana iri runhare rwakakosha kubva kune wandinoshanda naye, mutengi, kana nhengo yemhuri, asi vamwe vese vanogona kurega kundifonera.
Zvaunogona Kuita Kuti Ubatsire Digital Kukurukurirana Kuneta
Hedzino nzira sere dzaungagone kubatsira mukutengesa kwako uye kushambadzira kutaurirana kuedza.
Wana Wako - Ita kuti mugamuchiri wako azive chikonzero nei uchifanira kutaura naye, pfungwa yekukurumidzira, uye nei zvichimubatsira. Hapana chakanyanya kuipa, mumaonero angu, pane kushama “Ndiri kuedza kukubata…” meseji. handina basa nazvo… ndakabatikana uye wangodonhedza pasi pezvandinoisa pakutanga.
Usashandisa Abuse Automation - mamwe mameseji akakosha kumabhizinesi. Ngoro dzekutenga dzakasiiwa, semuenzaniso, dzinowanzoda zviyeuchidzo zvishoma kuti mumwe munhu azive kuti asiya chigadzirwa mungoro. Asi usazvinetse… Ndinoisa izvi kune vatengi… zuva, mazuva mashoma, kozoita masvondo mashoma. Pamwe havana mari yekutenga izvozvi.
Ita Zvaunotarisira - Kana iwe uchizogadzira otomatiki kana kutevera, zivisa munhu wacho. Kana ndikaverenga mune email kuti kufona kunotonhora kuchatevera mumazuva mashoma, ndinovazivisa kuti vasanetseke nhasi. Kana kuti ndichanyora ndovazivisa kuti ndakabatikana tobata base kota inotevera.
Ratidza Tsitsi - Ndakanga ndine chipangamazano kare kare akati pese paaisangana nemumwe munhu kekutanga, ainyepedzera kuti vaive varasikirwa nemhuri yavo. Zvaakanga achiita kwaiva kugadzirisa kunzwira tsitsi uye kuremekedza munhu wacho. Ungaite otomatiki maemail kune mumwe munhu asipo kumariro? Ndinopokana nazvo. Nokuti zvakakosha kwauri hazvirevi kuti zvakakosha kwavari. Iva netsitsi kuti vangave vaine zvimwe zvavanokoshesa.
Ipa Mvumo - Imwe yedzakanakisa nzira dzekutengesa kupa mvumo kune mumwe munhu kuti ataure Aihwa. Ndakanyora maemail mashoma mumwedzi wapfuura kune vanotarisira uye ndinovhura iyo email nekuvazivisa kuti iyi ndiyo yega email yavari kugamuchira uye ndinofara kunzwa zvakare kuti havasi kushayiwa. zvemasevhisi angu. Neruremekedzo kupa munhu mvumo yekuti Aiwa zvichabatsira kuchenesa inbox yavo uye zvinokugonesa kuti usatambise nguva uchitsamwisa vangango tarisira.
Offer Options - Ini handidi nguva dzose kugumisa hukama hwekufarira, asi ndingangoda kuita neimwe nzira kana imwe nguva. Ipa mugamuchiri wako dzimwe sarudzo - sekunonoka kwemwedzi kana kota, kupa kalendari yako link yekusangana, kana kupinda mune imwe nzira yekutaurirana. Waunofarira svikiro kana nzira yekutaura ingasava yavo!
Wana Wenyama -Sezvo zvivharo zvadzikira uye kufamba kuri kuvhurwa, yave nguva yekudzokera kunosangana nevanhu pachedu apo kutaurirana kunosanganisira manzwiro ese anodiwa nevanhu kuti vataure zvinobudirira. Kutaurirana kusiri kwemazwi kwakakosha pakugadzira hukama… uye izvo hazvigone kuitwa kuburikidza nemameseji.
Edza Direct Mail -Kuenda kune mamwe masvikiro anopindira kune anogamuchira asingateereri anogona kunge ari nzira isiriyo. Wakamboedza mamwe masvikiro senge tsamba yakananga? Takava nebudiriro huru nekutarisa tarisiro netsamba yakananga nekuti haasi makambani akawandisa anotora mukana nazvo. Nepo email isingadhure yakawandisa kuendesa, tsamba yako yakananga haina kuvigwa mubhokisi retsamba nezviuru zvezvimwe zvimedu zvetsamba zvakananga.
Nepo tsamba dzisina kunangwa dzakanangana nevatengi hadzisi kuzoteererwa nevatengi kazhinji senge off-base digital ads kana email blasts, yakanyatso itwa yakananga tsamba inogona kugadzira zvisingakanganwike uye zviitiko zvinokanganisa. Kana yakabatanidzwa muhurongwa hwekushambadzira hwesangano, tsamba yakananga inobvumira makambani kutyaira yakakura ROI uye kuwedzera brand affinity pakati peazvino neamangwana vatengi.
Nick Runyon, CEO wePFL
Wese Munhu Ari Kusangana NeDigital Fatigue
Mumamiriro ebhizinesi anhasi, makwikwi ekuona, kudzvanya, uye kugovana pfungwa anotyisa. Zvisinei nekuwedzera kune simba uye kwese kwese maturusi ekushambadzira edhijitari, mabhizinesi mazhinji anozviwana achinetsekana kuwana traction pakati pevatengi uye tarisiro.
Kuti unzwisise zvirinani matambudziko anosanganikwa nawo nemakambani mazhinji mukutora pfungwa dzevateereri, PFL yakaongorora vanopfuura mazana matanhatu eUS-based enterprise professionals. Zvigumisiro zvePFL 2022 Hybrid Audience Engagement Survey vakawana kuti kusarudzika, zvemukati, uye nzira dzekutengesa dzemuviri, senge tsamba yakananga, zvinogona kuve nemhedzisiro yakakura pakugona kwema brand kusvika vateereri vakatsva.
Dzvanya Pano Kurodha Iyo Infographic
Zvakawanikwa zvakakosha kubva muongororo yevanopfuura mazana matanhatu eUS-based bhizinesi nyanzvi dzinosanganisira:
52.4% yevashandi vebhizinesi vari kusangana nekuneta kwedhijitari semhedzisiro yehuwandu hwehuwandu hwekutaurirana kwedhijitari yavanogamuchira.
80% yeC-level vakapindura uye 72% yevakananga-level vakapindura vanoratidza ivo inzwa kuremerwa nehuwandu hwekushambadza kwedhijitari vanogamuchira kubasa.
56.8% yevakaongororwa nyanzvi vari zvakanyanya kuvhura chimwe chinhu chakagamuchirwa kuburikidza netsamba yepanyama pane email.
Mune yanhasi Attention Economy, kugona kubata vateereri uye kuwana kubatanidzwa kwavo chave chinhu chinoshomeka. Kuneta kwedhijitari ichokwadi kune vanhu vazhinji, zvinoreva kuti mhando dzinofanirwa kutsvaga nzira nyowani dzekukurudzira vatengi kutora matanho. Tsvagiridzo yedu ichangoburwa inojekesa mamiriro emazuva ano emakwikwi ekushambadzira eB2B uye kuti makambani angashandise sei nzira dzakasanganiswa kuratidza vatengi uye tarisiro.
Heinoi yakazara infographic ine yakabatana ongororo mhinduro:
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye Karenda munyaya ino.
Tags: 2022calendlydigitaalinen kutaurirana kunetadigital kunetamail yakanangaengagement surveyhybrid yevateereri kuita ongororoinfographiclixarMarketingPersonalizationtsamba yakananga yakasarudzikatsamba yakasarudzikapflkushambadzira kwemuviri